2022 मा वित्त मा अर्को "ठूलो कुरा" के हुनेछ? - BancaNEO
हामी बायोमेट्रिक भुक्तानी भन्छौं। २०२१ ले डिजिटलकरणको सन्दर्भमा वित्तीय सेवाहरुमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याइरहेको छ। ग्राहकहरु लाई अनलाइन सेवाहरु र निजीकृत टेक्नोलोजीहरु मा अधिक र अधिक निर्भर हुँदै गइरहेको छ, जसले ब्यापार लाई लक्षित दर्शकहरु लाई विस्तार गर्न र छिटो बढ्न मा मद्दत गर्दछ। विज्ञहरुका अनुसार, वित्तीय सेवाहरुको बजार २०२२ सम्ममा २.26.5.५ ट्रिलियन डलर पुग्ने निश्चित छ.
Fintech आविष्कारहरु कि पहिले नै डिजिटल वित्त मा लहरहरु पैदा गरीरहेछन् बास (बैंकिंग को रूप मा एक सेवा), तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय बैंक स्थानान्तरण, बैंक APIs, र अन्य फिनटेक कम्पनीहरु द्वारा प्रस्ताव गरीएको जस्तै सेवाहरु BancaNEO.
अनलाइन मात्र बैंकि to को लागी संक्रमण अर्को स्पष्ट प्रवृत्ति दुनिया भर मा लाखौं टेक- savvies द्वारा पीछा गरीएको छ। यसको मतलब यो छ कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता नवीनतम प्रविधिहरु संग राख्नु, बैंकहरु र ब्यापारहरु लाई आफ्नो ग्राहकहरु को अपेक्षाहरु लाई संतुष्ट गर्न को लागी र उनीहरुको लाभ को लागी नवाचार को लाभ उठाउन को लागी महत्वपूर्ण छ। भविष्यमा वित्तीय संस्थाहरु को लागी के हुन्छ एक नजर राखौं।
पासवर्ड बिस्तारै छन् तर बिस्तारै अप्रचलित हुँदैछन्। बायोमेट्रिक भुक्तानी, ब्लक मा नयाँ बच्चा, डिजिटल भुक्तानी को क्षेत्र मा आफ्नो लागी एक नाम बनाइरहेको छ। उनीहरु हाम्रो दैनिक भुक्तानी दिनचर्या मा छिटो एकीकृत गरीरहेका छन्, धेरै बाटो कि फिंगरप्रिन्ट टेक्नोलोजी एक पटक पछि लागे जस्तै।
हामी मध्ये धेरैले पहिले नै एप्पल पे वा गुगल पे सेट गरेर हाम्रो स्मार्टफोन मा चीजहरु को लागी छिटो र सजीलै तिर्नको लागी पहिलो कदम चालेका छौं। यसको अतिरिक्त, टेक्नोलोजी बढ्दो भुक्तानी र पैसा हस्तान्तरण को बायोमेट्रिक प्राधिकरण को लागी प्रयोग गरीरहेको छ। उदाहरण को लागी, एक पारंपरिक पिन को सट्टा फिंगरप्रिन्ट पहिचान को उपयोग अब सम्पर्क रहित कार्ड भुक्तानी को लागी अन्वेषण गरीरहेको छ।
कसरी डाटा कब्जा र भण्डारण गरिएको छ?
फिंगरप्रिन्ट, अनुहार, आवाज, आईरिस, वा यहाँ सम्म कि शिराहरु: विभिन्न बायोमेट्रिक संकेतक भुक्तानी कार्यान्वयन को लागी लागू गर्न सकिन्छ। डाटा को प्रत्येक टुक्रा स collected्कलन र एक टेम्पलेट, जो तब एक डाटाबेस एल्गोरिथ्म मा यसको मिलान संग तुलना गरीन्छ रूपान्तरित छ। नतिजा को रूप मा, मिल्दो एल्गोरिथ्म प्रमाणित गर्दछ कि व्यक्ति हो जो उनीहरु को लागी दाबी गर्छन्।
भारत जस्ता देशहरु एक केन्द्रीकृत क्लाउड प्रणाली को उपयोग गर्दछ जसमा एक व्यक्तिको पहिचान डाटा भण्डारण गरीन्छ र भुक्तानी को समर्थन गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। विश्व को अन्य भागहरु मा, जस्तै यूरोप, गोपनीयता र डाटा सुरक्षा भारी नियमहरु को अधीनमा छन्। नतिजाको रूपमा, बायोमेट्रिक डाटा मात्र प्रयोगकर्ताहरुको फोन वा भुक्तानी कार्ड मा बचत गर्न सकिन्छ।
किन बायोमेट्रिक भुक्तानी अन्य समाधान भन्दा राम्रो छ?
पासवर्ड को संख्या कि प्रयोगकर्ताहरु लाई याद गर्नु पर्छ छिटो बोझिलो बन्न सक्छ। उल्लेख गर्न को लागी जब एक हतार मा छ र एक (सम्भवतः) धेरै कार्डहरु को लागी एक विशिष्ट पासवर्ड याद गर्न को लागी आवश्यक छ। यो असुविधा भुक्तानी ठगी को एक अतिरिक्त जोखिम संग आउँछ, यो क्रेडिट कार्ड पिन डाटा चोरी गर्न को लागी सामान्य छ।
नतिजाको रूपमा, थेल्स द्वारा एक विश्लेषण को अनुसार, बायोमेट्रिक्स बिभिन्न फाइदाहरु छन् जब यो प्रमाणीकरण को लागी आउँछ, दृष्टिकोण को बावजूद। स्रोत दाबी गर्दछ कि बायोमेट्रिक भुक्तानी हो:
सार्वभौमिक र (लगभग) सबै व्यक्तिहरु को लागी सेट अप गर्न सकिन्छ।
कुनै दुई औंठाछाप वा अनुहार एउटै हुनाले अद्वितीय।
स्थायी र समय संग परिवर्तन नगर्नुहोस्।
भविष्य मा तुलना गर्न को लागी पर्याप्त मापन योग्य।
एक भन्दा धेरै कारणहरु संग, त्यहाँ कुनै संदेह छैन कि बायोमेट्रिक भुक्तानी आगामी वर्षहरुमा डिजिटल फिनटेक नवीनता को भविष्य बन्नेछ।
यो अन्ततः महत्त्वपूर्ण छ कि बैंकहरु, Fintech startups, र कम्पनीहरु AI ​​भुक्तानी को विकसित प्रवृत्ति संग जारी रहन्छ। यो ग्राहक सन्तुष्टि र अनुभव मा छ प्रभाव उच्च छ। कम टेक-जानकार पनि सजीलै डिजिटल वित्तीय सेवाहरु को ईएमआई द्वारा प्रदान गरीएको संसारमा नेभिगेट गर्न सक्छन् BancaNEO साचेल संग।
कर्पोरेट र व्यक्तिगत ग्राहकहरु को लागी समाधान संग, BancaNEO Fintech startups, कानूनी र परामर्श, आईटी, र अधिक चाँडै आउँदै सहित विभिन्न उद्योगहरु को लागी अनुकूलित सेवाहरु प्रदान गर्दछ। तिनीहरूको उत्पादन दायरा भुक्तानी कार्ड, BaaS, अद्वितीय IBAN, सेतो लेबल कार्ड, र धेरै जस्ता आवश्यक पैसा व्यवस्थापन उपकरणहरु छन्।
बारेमा थप जान्न BancaNEOको फिनटेक विकास र विशेषज्ञता मा BancaNEO ब्लग।
अघिल्लो पोस्टFORBES - Mickael Mosse एक प्रतिबद्धता संग अनलाइन बैंकिंग को रिडीﬁ्ग गर्न प्रतिबद्धता BancaNEO
अर्को पोस्टMy NEO Group र Crypto Expo Milano बीचको रणनीतिक सम्झौता